Itoyi yokudibanisa i-AutoCAD kunye neArcGIS-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/I-Toy ukuxhuma i-AutoCAD ne-ArcGIS
Masicacise ukuba yiyiphi i-AutoCAD
Asibhekiseli kwiMaphu ye-AutoCAD okanye i-Civil3D, edibanisa neenkonzo ze-OGC kodwa kwii-AutoCAD 2007 kwiinguqulelo ezisezantsi, oko kukuthi, kuba zisebenza ngendlela yokusebenza kwe-georeferencing.
Masicacise ukuba yiyiphi i-ArcGIS:
Ayixhuma kwi-Geodatabase okanye i-mxd egcinwe kwindawo
Akukho nkonzo eyenziwe nge-ArcIMS yendabuko (ayithethi)
Kodwa ngeenkonzo ezidalwe nge-ArcGIS Server, ngaba ngumphathi wendawo, intranet okanye intanethi.
Yisithuluzi samahhala esenziwe ngu-ESRI"I-ArcGIS ye-AutoCAD" ekhutshwe, efakwe evumela ukuba oko kuvela kwi-AutoCAD ungabiza inkonzo yedatha enikezwe yi-ArcGIS Server.
Ifuna ukubonisa i-URL yenkonzo, kunye nohlobo lokugubungela ukukhuphela. Emva koko uyigcina kuMphathi weLayer kwaye inokulawulwa njengomaleko.
Ikwahlonela iimpawu kunye neepropati njengoko zidwetshwe kwi-ArcGIS kwaye unokubonisana nedatha yeetable edibeneyo.
Siyicinga ukuba liphulo elifanelekileyo lokuphucula ukusebenzisana kunye nezixhobo eziqhelekileyo ze-CAD, kuba ngelo xesha i-already kakade yaqonda ukuba ezinye iindlela zokuthumela nokuthumela ngaphakathi kufuneka zipheliswe; nangona kuyimfuneko ukubona oko abasebenzisi abatshoyo kwaye ukuba bayayinciphisa ukuxhuma nge-ArcSDE ukuya kwi-geodatabase.
Apha unako khuphela
Apha ungabona ividiyo yeentetho ezisetyenziswayo.
I-AutoCAD Imephu ESRI
Ngubani ongafuni ukunqoba i-Nokia
I-Gmail idibanisa ingxoxo ye-Audio-Video
Sawubona, ndalanda isicelo kwaye ndiyathetha, andinayo ingcamango ye-GIS ngoko ndifuna uncedo.
Umzekelo ndifuna ukudibanisa nayo, leyo sele sele imephu ayikho umncedisi njengoko ndingakwenza?
FREDDY GONZALEZ uthi:
Ndifuna ukuzihlaziya ngokwam iinkqubo eziwusizo kumsebenzi wam
Kumele ukuba yii-url ezisebenzela idatha phantsi kwe-OGC imigangatho nge-ArcGIS Server.
Elizweni lakho, kuya kufuneka uphando ukuba yeyiphi iinkonzo ezikhoyo.
Ndicinga ukuba kwiphepha le-ESRI kukho iikhathalogu zeenkonzo ezikhoyo.
nceda, ndafaka i-ArcGIS ye-AutoCAD kumatshini wam kwaye ndifumana impazamo ye-InvalidURI: i-URI ayinalutho.
Ndingathanda ukwazi ukuba ndiyakwazi ukufakela iifayile ze-Intanethi kunye nendlela endiyenza ngayo okanye ziphi iimaphepha ezihambelanayo.